चर्चित बलिउड फिल्म लेखकको मृत्यु, आफ्नाले बेवास्ता गरेपछि अनाथजस्तै त्यागे प्राण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
चर्चित बलिउड फिल्म लेखकको मृत्यु, आफ्नाले बेवास्ता गरेपछि अनाथजस्तै त्यागे प्राण
मुम्बइ। बलिउडका चर्चित फिल्म लेखक ब्रिज कात्यालको मृत्यु भएको छ । उनी रेक्टल क्यान्सरबाट पीडित थिए । ८५ वर्षका उनी मुम्बइको बान्द्रास्थित च्यारिटी अस्पतालमा आफ्नो उपचार गराइरहेका थिए । उनको पार्थिव शरीरलाई खण्डाला लगिएको छ जहाँ उनको अन्तिम संस्कार हुनेछ । ब्रिज कात्यालका नजिकका आफन्तका अनुसार उनको यस्तो हालतको कारण उनको पुत्रमोह हो । उनले आफ्नो मेहनतको कमाइ सबै छोरालाई दिइरहे तर उनका छोराबुहारीले उनको उपचारसमेत राम्रो डाक्टरबाट गराएनन् ।
उनले एक युवकलाई धर्मपुत्र बनाएका थिए । यी छोरालाई उनले यति माया गर्थे कि आफ्नो सारा सम्पत्ति उनैको नाममा गरिदिएका थिए । तर अन्तिम समयमा यस्तो अवस्था आयो कि छोराबुहारीले उनको कुनै वास्ता गरेनन् । उनी सधैं आफ्ना छोराबुहारीसँग बस्न चाहन्थे तर उनको यो इच्छा कहिल्यै पूरा भएन । उनले लेखेको फिल्ममा शशी कपुर, अमिताभ बच्चन लगायत कैयौं सुपरस्टारले काम गरेका छन् ।
कात्यालले अमिताभ बच्चनका अजूवा, ये रात फिर ना आएकी, विश्वास, शशी कपुरको जब जब फूल खिले लगायतका सुपरहिट फिल्मको स्क्रिप्ट लेखेका थिए । ब्रिजको अन्तिम शो आशिक बीबीका थियो । यो एक कमेडी शो थियो । उनले लेखेको टिभी सिरियल सांसका काम गरिसकेकी अभिनेत्री नीना गुप्ताका अनुसार उनीहरुले ब्रिजलाई एउटा घर बेचेर उपचार खर्च जुटाउन भनेका थिए तर उनले मानेनन् बरु सबै सम्पत्ति छोराको नाममा गरिदिए ।